Hadal Hayntii Ugu Halista Badnayd Iyo Dareenadii Ku Xeernaa | Marsa News
Hadal Hayntii Ugu Halista Badnayd Iyo Dareenadii Ku Xeernaa
Hargeisa:(Marsanews) Urur diimeedka Al Ictisaam (X Al Itixaad) oo Somaliland qasab ku afuriyay kuna ciidsiiyay.
Somaliland intii aan xalay saq badhkii la mirin waxay ku seexatay inay Sabtidu Soon tahay hadaba Maxaa dhacay.
Madaxda sar sare ee Al Ictisaam oo kala jooga Jigjiga-Nairobi/Muqdisho iyo Hargeisa oo ay colaad siyaasadeed gaamurtay kala dhaxayso Sucuudiga ayaa khadka telefoonka ku wada hadlay goor danbe oo dadka Af Soomaaliga ku hadlaa nabad ku seexday.
Waxaa la go’aamiyay in si loo khilaafo Sucuudiga oo cadaawad siyaasadeed iyo mid diimeed kala dhaxayso Ururka Al Ictisaam oo madaxdiisii carbeed uu xidh xidhay boqorka Sucuudigu in la farsameeyo xeelad lagu jabiyo soonka.
Somaliland maadaama ay dawladi ka jirto waxaa loo dagay shax aanay diidi karin oo ah in helo bugcag dalka ka mida oo tidhaahda bishii baanu aragnay waana Ceegaag oo uu xukumo wadaadka Ictisaam ee Somaliland ugu neceb Sh Cabdiwaaxid Xaashi.
Wasiirka Awqaafta Somaliland wuu ku qasban yahay inuu fuliyo amarka Amiirkiisa Ruuxiga ah ee urur diimeedka uu ka tirsanyay ee Al Ictisaam waana dabiici inuu u dhaga nuglaado.
Ujeedadu maaha Maalin bil la arkay oo la ciiday ee Waa dhoolatus cudada iyo saamaynta Al Ictisaam oo marka laga reebo Jabuuti dhulkii Soomaalida oo dhan ka samaystay dawlad dahsoon oo sida Ilkaha abeesada hoosta ka xidhiidhsan.
Sh Umal Nairobi
Sh.Ibraahim Dheere Jigjiga
Sh Cali Wajiis Muqdisho
Sh Khaliil Hargeisa oo uga wakiil ah Ururka meelaha ay kala joogaan iyo xilalka ay hayaan ayaa la hawl galiyay iyadoo la adeegsanayo dhalinyarada Baraha bulshada ee hoos taga xafiiska is dhex galka bulshada ee Farmaajo iyo Fahad laamihiisa kala duwan.
Dhoola tuskan ururuku ku guulaystay wuxuu ahaa mid lagu shirrabayay awooda is badal dhalinta ee ururka una sii gogol xaadhayay tallaabooyinka Hanashada talada dalalka ee xigi doonta.
*Fiiro Gaar ah *
A- Somalia waxaa ka talisa dawlad u dhalatay Al Ictisaam oo Fahad Yaasiin baa Farmaajo amarada Ururka ka soo fula ku fuliya.
B- Dawlad Degaanka Somaliga Itoobiyana waxaa ururka gacanta u galay Mustafe Cagjar.
C- Somaliland na waxaa ururka u jooga laxaad aan la dhayalsan karin oo ku kala filiqsan
Gudiyada xallinta khilaafaadka iwm.
D- Kenya Ururku wuu ku qasbanaaday inuu qaato amarada Uhuru oo Waa kuwii Masaajidada xidhay laakiin Somaliland iyo Somaliya oo ay xukuumadaha ka jira saamayn ku leeyihiin way diideen inay xidhaan Masaajidada waxaase uu ku leeyahay Ururku saldhig dhaqaale iyo mid saamayn siyaasadeed.
E- Dhul waynihii Soomaalidii Shanta ahayd dagi jirtay waxa maanta ka bad qaba aafada Ictisaam oo ka Halis badan aafada Covid 19 dalka Jabuuti oo qudha.
Ururka Al Ictisaam oo ah kii dhalay Al Shabaab maanta wuxuu marayaa heer uu is mahaday hase yeeshee
wuu daadan doonaa
gudcurkana Caddaa xigi.
Umadda Soomaaliyeedna waabari San baa u dhalan waxaana u kici curaddo khayr qaba oo xidida u siibi doona argagixada Al Ictisaam doorashooyinka ku soo fool leh Somaliland iyo Somalia iyo DDS Ethiopia Waxaa lagaga sifayn doonaa inay xilal siyaasadeed qabtaan xubnaha Al Ictisaam ee gacan iyo af iyo ku dhiig layaasha ah Idanka Allaah na Muslimiinta daacadda ah baa ka adkaan doona xaqaanay tagi.